Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 23/05/2018
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 23/05/2018
Independent media group including foreign journalists collects news in Maungtaw
Maungtaw, May 22
An independent media group including foreign journalists arrived Inn Din village on 22 May 2018 and met the local people to gather news.
Then, the media group went to Kainggyi (Mro) village in Maungtaw Township, and interviewed Village Administrator. They continued to the Maungtaw District General Administration Department, where Maungtaw District Deputy Commissioner briefed on terrorists attacks by ARSA in 2016 and 2017 and actions taken against the ARSA terrorists in accordance with the law, measures for food sufficiency, and readiness for repatriation of returnees from Bangladesh.
They proceeded to Hla Pho Khaung transit centre whereaperson in charge of the camp detailed out the readiness for the repatriation process and replied to questions raised by the media personnel.
The media group visited Pan Taw Pyin village where the Village Administrator briefed on terrorist attacks, the process of repatriation, new village construction, matters of NV Cards, and development and socio-economic status of the region. Then, they went to the Kanyintan market and collected news.
—Min Min Zaw, The Global New Light of Myanmar
Naypyitaw, May 22
The mobile team from the Ministry of Health and Sports visited Buthidaung People’s Hospital on 20 May and Maungtaw People’s Hospital on 21 May to observe the healthcare services, the construction ofasmall blood bank and the ward extension works in the hospital.
The team also visited Taung Pyo (Letwe) Hospital in Maungtaw Township on 21 May, and inspected the healthcare services provided by the hospital and the construction of additional wards and apartments for the staff. They checked the preparations made to provide healthcare services to the returnees. Furthermore, they visited the Hla Pho Khaung transit centre, where they inspected the preparedness of the clinic, obstetrics room and the medical teams.
ပြည်ပသတင်းမီဒီယာများ ပါဝင်သည့် သတင်းအဖွဲ့ မောင်တောဒေသ၌ သတင်းရယူ
ပြည်ပသတင်းမီဒီယာများပါဝင်သည့် သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့သည် မေလ ၂၂ရက်နေ့တွင် အင်းဒင် ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိပြီး ဒေသခံပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း သတင်းရယူကြသည်။
ထို့နောက် သတင်းအဖွဲ့သည် မောင်တောမြို့နယ်ကိုင်းကြီး(မြို)ရွာသို့ ရောက်ရှိပြီး ကျေးရွာ တာဝန်ခံနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း သတင်းရယူကြသည်။ ယင်းနောက် သတင်းအဖွဲ့သည် မောင်တော ခရိုင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ ရောက်ရှိပြီး ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ၂၀၁၆နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့၏ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ၊ အဆိုပါ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များအား တရားဥပဒေနှင့်အညီ တန်ပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ၊ ဒေသတွင်း စားနပ် ရိက္ခာဖူလုံရေး ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများ၊ နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား ပြန်လည်လက်ခံရေးနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ သတင်းအဖွဲ့သည် လှဖိုးခေါင်ကြားစခန်းသို့ ရောက်ရှိရာ စီမံကိန်းတာဝန်ခံက မောင်တောဒေသမှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား စခန်းအတွင်း ပြန်လည်လက်ခံနိုင်ရန် အသင့်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများကို ရှင်းလင်းပြောကြားရာ သတင်းအဖွဲ့က သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းကြသည်။
ထို့နောက် သတင်းအဖွဲ့သည် ပန်းတောပြင်ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိပြီး ပန်းတောပြင် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ပန်းတောပြင်ကျေးရွာအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်စဉ်များ၊ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ၏ အခြေအနေ၊ ကျေးရွာသစ် တည်ဆောက်ထားရှိမှု ၊ NV Card ဆိုင်ရာများ၊ ပန်းတောပြင်ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအခြေအနေများကို မေးမြန်းသတင်းရယူကြသည်။ သတင်းအဖွဲ့သည် မောင်တောမြို့ ကညင်တန်းဈေးသို့ရောက်ရှိကြပြီး သတင်းရယူခဲ့ကြသည်။
ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၌ ဗဟိုကွင်းဆင်းအဖွဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ အားဖြည့်ဆောင်ရွက်
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ကွင်းဆင်းအဖွဲ့သည် မေလ ၂ဝ ရက်တွင် ဘူးသီးတောင် မြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့လည်းကောင်း၊ မေ၂၁ ရက်တွင် မောင်တောခရိုင် ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ လည်းကောင်း ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဆေးရုံတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှု၊ သွေးလှူဘဏ်ငယ် တည်ဆောက်နေမှုနှင့် လူနာဆောင်များ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်နေမှု အခြေအနေ များကို ကြည့်ရှု၍ လိုအပ်သည်များကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။
ကွင်းဆင်းအဖွဲ့သည် မေ ၂၁ ရက်တွင် မောင်တောမြို့နယ် တောင်ပြို (လက်ဝဲ) ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဆေးရုံ၌ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ လူနာဆောင်နှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်နေမှု အခြေအနေများကို ကြည့်ရှု၍ လိုအပ်ချက် များအား ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍လှဖိုးခေါင်ကြားစခန်းတွင် တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာမည့်သူများအား ပြန်လည်လက်ခံရာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးနိုင်ရန် အတွက် ဆေးပေးခန်းများ ပြင်ဆင်ထားရှိမှု၊ သားဖွားခန်း စီစဉ်ထားရှိမှုနှင့် ဆေးအဖွဲ့များ အသင့်ပြင်ဆင်ထားရှိမှု စသည်များကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၍ လိုအပ်သည်များ ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။